Weerar Lagu Qaaday Xarunta Madaxtooyada Maamulka Hiir-shabeelle. – Calamada.com
Weerar Lagu Qaaday Xarunta Madaxtooyada Maamulka Hiir-shabeelle.
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar loo adeegsaday Bamka gacanta laga tuura oo habeenkii xalay lagu weeraray xarunta madaxtooyada maamulka gaala raac Hiir-shabeelle oo ku taala degmada Jowhar ee gobalka Shabeelada dhexe.
Dhawaaqa qaraxa lagu weeraray madaxtooyada maamulkaasi waxaa si aad ah looga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmada Jowhar’waxa uu bamka ku qarxay bartmaha dhisamaha xarunta madaxtooyada.
Qaraxa kadib waxey ciidamada Kufaarta Afrikaanta iyo kuwa Murtadiinta ooda ka qaadeen rasaas fara badan oo muddo socotay taasi oo mujineysa iney jirta khasaara shisheeyaha iyo daba dhilifyadooda kasoo gaartay weerarkaasi Bam.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Bamka uu sababay khasaara dhaawacyo ah uu soo gaaray askar isugu jirta ciidamada Nasaarada Burundi iyo kuwa maamulka dowlada Itoobiya u adeega ee isku magacaabay Hiir-shabeelle.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in weerarkaasi ay fuliyeen ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo weeraro joogta ku qaada gaalada soo duushay iyo kuwa la shaqeeya gaaladaasi.
Previous: Askari Lagu Dilay Degmada Waabari Ee Gobalka Banaadir.